ဆေးရုံထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် China TS Manual Hydraulic Surgical Operating Table | Wanyu
ဆေးရုံအတွက် TS လက်စွဲစာအုပ်ဟိုက်ဒရောလစ်ခွဲစိတ်ကုသဇယား
TS ဟိုက်ဒရောလစ်ခွဲစိတ်စားပွဲသည်ရင်သားကင်ဆာနှင့်ဝမ်းဗိုက်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ENT၊ သားဖွားမီးယပ်အထူးကု၊ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုနှင့်စသည်တို့အတွက်သင့်လျော်သည်။
Y ပုံသဏ္baseာန်အခြေစိုက်စခန်းသည်ဟိုက်ဒရောလစ်လည်ပတ်စားပွဲတွင်တည်ငြိမ်မှုနှင့်လွတ်လပ်သောနေရာများရှိခြင်းကိုသေချာစေရန်အသုံးပြုသည်။ သို့မှသာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများသည်လူနာအားသုညအကွာအဝေးသို့ရောက်နိုင်သည်။
၁။ Advanced Memory Foam
ဟိုက်ဒရောလစ်ခွဲစိတ်စားပွဲ၏မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းသည်မီးလျှံနှေးကာ anti-static ဖြစ်သည်။ မှို polyurethane (PU) မွေ့ယာသည်သန့်ရှင်းလွယ်ကူပြီးသက်တမ်းရှည်ပါသည်။
2. Built-in ကျောက်ကပ်တံတား။
လက်ကိုင်ကိရိယာကိုကိုက်ညီသည့်အပေါက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ လက်ကိုင်ကိုလှည့်ပါ။ ခါးတံတားကိုသင့်လျော်သောအနေအထားသို့တက်ပါသို့မဟုတ်တက်ပါ။ ထို့နောက်လက်ကိုင်ကိုဆွဲပါ။ TS ဟိုက်ဒရောလစ်လည်ပတ်စားပွဲအတွက်ခါးတံတားသည် ၁၀၀ မီလီမီတာအထက်ရှိသည်။
၃ Hydraulic System
၄ularရာဝတီ Aညှိနှိုင်း wi Gအဖြစ် Sချစ်သူ
နောက်ခံပြားနှင့် TS Hydraulic operating table ၏ leg plate joints များသည် gas spring cylinder ထောက်ခံမှုပုံစံများဖြင့်တပ်ဆင်ထားပြီးညှိနှိုင်းမှုများအားနူးညံ့စွာ၊ အသံတိတ်ခြင်းနှင့်တုန်ခါမှုကင်းစေခြင်းဖြင့်ပူးတွဲဖွဲ့စည်းပုံကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ပြီးလူနာမှကျဆင်းခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
၅arger caster ဒီဇိုင်း
စက်မှုဟိုက်ဒရောလစ် operating table ၏အောက်ခြေကိုကြီးမားသော casters (အချင်း) နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် ≥ရွေ့လျားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော 100mm) ။ ဘရိတ်အုပ်သည့်အခါ casters များမြင့်တက်လာသည်။ အိပ်ယာခင်းသည်မြေပြင်နှင့်ခိုင်မာစွာထိတွေ့နေပြီးတည်ငြိမ်မှုလည်းကောင်းသည်။
ဓာတ်ငွေ့စမ်းနှင့်အတူ 4.Angular ချိန်ညှိ
5. ပိုကြီးသော caster ဒီဇိုင်း
စံပြပစ္စည်း TS ဟိုက်ဒရောလစ်လည်ပတ်စားပွဲတင်
အရှည်နှင့်အကျယ် 2050mm * 500mm
မြင့်တက်ခြင်း (အပေါ်နှင့်အောက်) 890mm / 690mm
Head Plate (အပေါ်နှင့်အောက်) 60 ° / 60 °
နောက်ကျောပြား (အပေါ်နှင့်အောက်) 75 ° / 15 °
ခြေထောက်ပြား (အပေါ် / အောက် / အပြင်) 30 ° / 90 ° / 90 °
Trendelenburg / ပြောင်းပြန် Trendelenburg 25 ° / 25 °
ဘေးတိုက်စောင်း (ဘယ်နှင့်ညာ) 20 ° / 20 °
အဓိကပစ္စည်း 304 သံမဏိ
အများဆုံးဝန်စွမ်းရည် 200 ကီလိုဂရမ်
နံပါတ် နာမည် ပမာဏ
1 မေ့ဆေးမျက်နှာပြင် ၁ အပိုင်း
2 ခန္ဓာကိုယ်အထောက်အပံ့ ၁ တွဲ
3 Arm ပံ့ပိုးမှု ၁ တွဲ
4 ပခုံးနားခြင်း ၁ တွဲ
5 ဒူးထောက်ချခြင်း ၁ တွဲ
6 Clamp ကိုပြုပြင်တာတွေ 1 သတ်မှတ်မည်
7 မွေ့ရာ 1 သတ်မှတ်မည်
8 ခန္ဓာကိုယ်သိုင်းကြိုး 1 သတ်မှတ်မည်
ရှေ့သို့ TDY-1 China Electric Medical Operating Table ဆေးရုံစျေးနှုန်း
နောက်တစ်ခု: LEDD500 / 700C + M မျက်နှာကျက်ကို LED ကင်မရာနှစ်လုံးခုံးစစ်ဆင်ရေးအခန်းမီး
TY သံမဏိလက်စွဲစာအုပ်ဟိုက်ဒရောလစ်ခွဲစိတ်ခြင်း tab ...
TS-1 သံမဏိစက်မှု Hydraulic Opera ...